Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 58
Inona no manery antsika hitory bebe kokoa momba ny hevitray. Hatraiza no ahafahantsika manohitra ny heviny amin'ny hafa?
Ny hevitra iray dia vokatry ny fisainana. Ny hevitra dia ny fomba fijery natao teo anelanelan'ny finoana sy fahalalana fotsiny momba ny lohahevitra na zavatra. Ny olona manana ny heviny momba ny zavatra iray, tsy misy fanavahana amin'ny olona manana fahalalana na finoana fotsiny momba ilay raharaha. Ny olona iray dia manana ny heviny satria efa nieritreritra ny lohahevitra izy. Ny heviny dia mety na marina na tsy marina. Na marina na tsy miankina amin'ny toerana alehany sy ny fomba fisainany, Raha tsy misy fanavakavahana ny eritreriny, dia mety marina ny heviny ary, na dia manomboka amin'ny toerana tsy izy aza izy dia hanaporofo fa diso izy ireo ny fisainany. Raha mamela ny fitsarana an-tendrony hanelingelina ny heviny anefa izy, na miorina amin'ny toerany amin'ny fitsarana an-tendrony, dia mazàna no diso ilay hevitra namboariny.
Ny hevitra namboarin'ny olona iray dia maneho ny fahamarinana. Mety ho diso izy, nefa mbola mino izy ireo fa marina. Raha tsy eo ny fahalalana dia olona iray no hitsangana na ho lavon'ny heviny. Rehefa miresaka momba ny fivavahana na ny sasany ny heviny, dia mino izy fa tokony hijoro ho azy ireo izy ary mahatsiaro tena ho voataona hanao ny heviny amin'ny hafa. Avy eo avy eo ny fahatongavanany.
Ny manery antsika hahay hitory ny hevitray dia ny finoana na fahalalana izay ijoroanay ny hevitra. Mety hamporisika antsika koa ny faniriana hahazoan'ny hafa tombontsoa amin'izay heverintsika ho tsara. Raha ny fahalalana tsy miangatra ary ny faniriana hanao soa no ampiana ny fiheverana manokana, ny fiezahana hamadika ny hafa amin'ny heviny manokana dia mety hiteraka fanasina, fa raha tsy ny tsara, dia hisy fahavoazana atao. Ny antony sy ny tsara fanahy no tokony ho mpitari-dalana antsika amin'ny fitoriana olona. Ny antony sy ny tsara-mamela antsika hanolotra ny hevitray amin'ny adihevitra, fa mandrara antsika hiezaka ny hanery ny hafa hanaiky izany. Ny antony sy ny tsara-dia mandrara antsika tsy hanizingizina hoe ny hafa tokony hanaiky sy hiova hevitra amin'ny hevitsika ary manjary manatanjaka antsika sy hanao ny marina ho fanohanana izay heverintsika fa fantatsika.